Sunday November 11, 2018 - 11:30:44 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa wali kasii socda tartanka siyaasadeed oo u dhaxeeya shakhsiyaadka dabadhilifyada ah ee doonaya in ay qabtaan xilka hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Koonfur galbeed.
Mukhtaar Rooboow oo kamid ah siyaasiyiinta xildoonka ah ee utaagan qabashada madaxweynaha 'Maamulka Koonfur galbeed' ayaa bilaabay in uu siyaasaddiisa ka gado wakiillada dowladaha reergalbeedka ee Soomaaliya.
Rooboow oo kulan la qaadanayay safiirka dowladda Ingiriiska uqaabilsan Soomaaliya ayaa muujiyay sida uu ugu jajabanyahay reergalbeedka, sawir lasoo dhigtay barta Twitterka ee safaaradda UK Soomaaliya waxaa kasoo muuqanayay Rooboow oo labada gacmood ku salaamaya safiirka caddaanka ah.
Wuxuu ahaa muuqaal muujinayay shisheeye jaceyl uu durbaba lasoo shir tagay Rooboow, safiirka Ingiriska ayaa hal gacan usoo taagay Rooboow kadibna wuxuu si jiljileec leh ugeliyay labadiisa gacmood.
Lama oga waxa ay labada dhinac kawada hadleen balse kulankan ayaa farriin u ahaa in waxa loogu yeero beesha caalamka ay ku qanacsanyihiin tanaasulka dhanka Mabda'a ah ee Rooboow sameeyay waxaana waxba kama jiraan noqday xayiraaddii ay wasaarradda ammaanka kusoo rogtay Mukhtaar Roobow.